> Resource > Video > Movavi Video Converter Alternative: dhakhso ah, qaabab More, Initiative
Raadinta a kale Movavi Video Converter? Halkan qodobkan ayaa kuu sheegi doona software la mid ah. Waxa kaliya ma ahan shaqeeyaa ay badal u tahay Movavi Video Converter, laakiin sidoo kale waxa uu leeyahay hawlaha awood badan u badan.
Wondershare Video Converter Ultimate for Mac ( version Windows la heli karo) gabi ahaanba waa ugu fiican Movavi Video Converter Alternative. Waxaad la soo jiitay doona ay 30X xawaaraha si dhakhso ah, video diinta sameecadda ah, hawlaha qaab beddelidda siman, ka qaabab kala duwan oo ay taageerayaan iyo hindisaha ah ee video Customization.
Waa maxay Tani Movavi Video Converter Alternative fiican
Sida loo rogo ama la soo codsatey Movavi Video Converter
The Movavi Video Converter Alternative sii fiican tahay in siyaabo badan. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu sareysa in uu leeyahay in ka badan tartanka. Fadlan eeg xaqiiqooyinka hoos ku qoran si aad u ogaato sida baxay.
Sameecadda Conversion: Iyada oo barnaamijkan weyn oo aad loogu badalo kartaa file ka mid qaab si kale ugu 30X xawaaraha si dhakhso ah. Waxaad ku hubin karnaa tayada joogo oo keliya sida ugu fiican ee asalka ah oo leh sifooyin la mid ah iyo heerka yara, xal heerka la mid ah, jir iyo ka badan.
Taageer qaabab Media u ballaaran: Iyada oo kale Movavi Video Converter, waxa aad furan kartaa kaliya nooc kasta oo file video ka dibna u badalo si nooca format in aad doonaysaan aan khasaaro tayada wax. Plus waxay ka dhigi kara in aad daawato aad video on kaliya oo ku saabsan qalab kasta, oo ay ku jiraan iPad, iPod, iPhone, Apple TV, Android, Google Nexus iyo qaar badan.
User Interface Friendly: Users ku dari kartaa file ah, iyadoo fudud u qaado qaab la doonayo, iwm si ay u isticmaalaan interface. Waxa ay muujinaysaa in xogta shaashadda meesha waa ay fududahay in la fahmo. Idinkuna ma waxaad u baahan tahay inaad waqti ku lumiso barashada sida loo isticmaalo. Its interface dareen kaliya tellsyou wax walba.
Initiative for shaqsinimo: Waxa kale oo suuragal ah in ay soo saaraan presets caadadii iyadoo shardi looga dhigayo goobaha kala duwan aad jeceshahay sida xal heerka, xoogaa ama heerka jir. Sidoo kale codsigan ayaa ka dhisay-in editor video, aad shakhsiyeeyo kartaa video hor conversin sida ay aad u dhadhan.
Halkan waxaa ku qoran tusaale ah sida ay u fududahay in loogu badalo AVI isticmaalaya kale Movavi Video Converter:
Talaabada 1: Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda ka Movavi Video Convereter Alternative, dajiyaan files AVI aad adigoo riixaya batoonka "+", ama si toos ah jiidi jeedi video codsigan.
Talaabada 2: Dooro qaab aad la doonayo in ay leeg- tahay qaab wax soo saarka hoose ee interface ka.
Tallaabo 3: Ku bilow qaab beddelidda. Riix badhanka diinta ku yaal dhinaca midig hoose ee interface ka, iyo hawshu bilaabato.
Hel Alternative Best ka DVDVideoSoft
Sida loo Beddelaan MP4 in DivX